Ahoana ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro: karazana sy taxonomia | Fanavaozana maintso
Ahoana ny fiasan'ny panneaux solaires
Fantatsika fa ao anatin'ny angovo azo havaozina, ny angovo avy amin'ny masoandro no manome betsaka. Mikasika ireo trano kely fanjifana tena dia mitombo tsikelikely i Espana. Betsaka ny trano no nisafidy ny hametraka tontonana photovoltaic satria izy ireo dia maneho tahiry tsara amin'ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra ary afaka mahazo andraikitra ara-tontolo iainana izay takin'ny fotoana isika. Na izany aza, maro ny olona tsy mahalala ny fomba fiasan'ny panneaux solaires.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny fomba fiasan'ny panneaux solaires sy izay rehetra mifandraika amin'izany.
1 Ahoana ny fiasan'ny panovan'ny masoandro photovoltaic
2 Herin'ny tontonana masoandro
3 Ahoana ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro: taxonomy
4 Tombontsoa amin'ny takelaka monocrystalline
Ahoana ny fiasan'ny panovan'ny masoandro photovoltaic
Araky ny anarany, ny angovo avy amin'ny masoandro dia manararaotra angovo avy amin'ny masoandro mba hiteraka angovo herinaratra. Anisan'ireo tombony ananantsika amin'ny angovo avy amin'ny masoandro fa tsy mandoto ny tontolo iainana izy ireo, tsy misy fetra izany, na dia misy ihany aza ny fatiantoka sasany toy ny fitohizany. Ny taranaka Photovoltaic dia ny fananana tokony hananan'ny fitaovana sasany hiteraka herinaratra rehefa iharan'ny taratra masoandro. Mitranga izany rehefa mamoaka elektronika mamorona tondra-herin'ny herinaratra ny angovo amin'ny tara-masoandro. Tokony ho fantatsika fa ny taratra masoandro dia ny fikorianan'ny sary.
Raha te hahalala ny fomba fiasan'ny tontolon'ny masoandro dia tsy maintsy fantarintsika izay voaforon'ny maodelin'ny sela misy fotovoltaika. Tsy inona izany fa ny sosona silika feno fonosana sy borona. Noho ny taratra avy amin'ny masoandro mamokatra fiampangana herinaratra dia toy ny manamboatra azy ireo ao anaty modely ka ny voltage dia azo ahitsy amin'ny rafitra DC azo ampiasaina. Amin'ny alàlan'ny inverter ankehitriny dia ny angovo mitohy ateraky ny tontolon'ny masoandro novaina ho angovo mifandimby izay hampiasaina ho an'ny trano.
Ny angovo amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny inverter no misy ny angovo mifandimby. Aza adino fa mifandimby angovo ianao izay lanina mandritra ny andro isan'andro. Ny herinaratra nomen'ny sela avy amin'ny masoandro dia somary ara-dalàna sy mitohy hatrany. Na izany aza, ny habetsaky ny herinaratra omena dia miankina amin'ny hamafin'ny taratry ny masoandro izay milatsaka amin'ny tontolon'ny masoandro. Noho izany, ny fahombiazan'ny tontolon'ny masoandro dia miankina betsaka amin'ny herin'ny hazavana azony. Ny toby samihafa dia milaza araka ny ora amin'ny andro, ny taona ary ny toetrandro ankehitriny.
Herin'ny tontonana masoandro
Mba hahafantarantsika ny fomba fiasan'ny panneaux solaires dia tsy maintsy fantarintsika tsara ny fikajiana ny herin'ny maodelin'ny masoandro. Ary rehefa mandre hery dia tsy maintsy kajy ihany koa ny fahombiazan'ny takelaka. Ny refy ampiasaina amin'ny Ny modely amin'ny masoandro dia tanterahina amin'ny watts tampony (Wp). Izy io dia refy iray ampiasaina amin'ny fanovozan-kevitra ary izy io no mandrefy ny fahombiazan'ny takelaka ahafahana mamorona, aoriana, fampitahana eo amin'izy ireo.
Tokony ho takatra fa ny habetsaky ny taratra masoandro izay milatsaka amin'ny tontolon'ny masoandro dia miovaova arakaraka ny fotoan'ny andro sy ny taona. Ny ankehitriny vokariny dia tsy maintsy kajy amin'ny oscillations be dia be ary izany dia sarotra ny manao kajy. Tsy hamokatra angovo mitovy habe foana isika amin'izay, ka afaka manombatombana marina na mihoatra. Mba hamahana io olana io dia ampiasaina ny watt avo indrindra. Izy ireo dia maneho ny zava-bitan'ny takelaka nomena taratra masoandro sy mari-pana mahazatra. Mahatonga azy io ho zava-dehibe rehefa manamboatra fametrahana fotovoltaika hamakafaka ny isan'ny tampon'ny watt Tsy maintsy apetraka izy ireo mba hahazoana ny fahaizan-tena mihinana faran'izay betsaka. Rehefa mametraka panneaux solaires dia tsy maintsy jerena avokoa ny lafin-javatra rehetra, toy ny faritra jeografika, ny firindrana ny tafo sy ny zoro. Amin'izany fomba izany, ireo data rehetra ireo dia tsy maintsy ampidirina handinihana ny fanjifana sy ny fanantenana ary manombatombana ny haben'ny fametrahana izay mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay avy.
Ahoana ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro: taxonomy
Na dia niova be aza ny panneaux solaires hatramin'ny nanamboarany azy voalohany, dia amboarina amin'ny fitaovana avo lenta kokoa izy ireo ankehitriny izay mahomby kokoa. Misaotra an'io, afaka mampitombo ny fahombiazanao izahay amin'izay Ny angovo avy amin'ny masoandro dia napetraka ho angovo azo soloina, azo havaozina ary ahazoana tombony tanteraka amin'ny fotoana fohy sy maharitrana. Ny fizotrany izay mitranga ao anatin'ny selan'ny masoandro dia mbola vokarin'i Einstein tamin'ny taona 1905.
Misy fomba samihafa hampitahana ireo takelaka miorina amin'ny silikika ary azo zaraina amin'ny sokajy maromaro izy ireo: amorphous, polycrystalline ary monocrystalline. Hodinihintsika hoe inona avy ireo toetra mampiavaka ny karazana tontolon'ny masoandro:
Takelaka tsy misy fangarony: tsy dia ampiasaina firy izy ireo satria tsy manana firafitra voafaritra ary very fahombiazana betsaka mandritra ny volana voalohany iasana.
Takelaka polycrystalline: Izy ireo dia mifangaro amin'ny kristaly misy endrika samihafa ary miavaka amin'ny fananana loko manga. Ny dingan'ny famokarana dia manana tombony amin'ny mora vidy kokoa nefa miaraka amin'ny fatiantoka ny vokatra tsy mahomby kokoa.
Panels Monocrystalline: izy ireo dia heverina ho vokatra avo lenta indrindra. Eto ny sela dia mamorona tontonana ary misy kristaly silicon tokana sy madio madio izay mihamafy amin'ny maripana mitovy homamiadana. Noho io fanamboarana io dia manana fahombiazana sy fahombiazana ambonimbony kokoa izy ireo ary mamela ny elektrôna hikisaka malalaka kokoa. Na dia lafo kokoa aza ny fizotran'ny famokarana, dia manome fahombiazana bebe kokoa ireo modules.
Tombontsoa amin'ny takelaka monocrystalline
Izy ireo no be soso-kevitra indrindra satria efa saika lany andro ilay voalohany. Ny hany tombony ananan'ny polycrystallines dia ny vidiny somary ambany kokoa. Monocrystallines dia manana tombony amin'ny fananana fahombiazana avo lenta ary fiasa tsara kokoa amin'ny tontolo tsy dia misy firy amin'ny tara-masoandro. Midika izany fa tsy ho very ny fahombiazany na dia tsy dia manintona loatra aza ny tontolo iainana.
Manantena izy fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny panneaux solaires sy izay rehetra entiny izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Ahoana ny fiasan'ny panneaux solaires
Inona no atao hoe teboka madio?
Biby lany tamingana